Wasaarada Warfaafinta oo tababarayso wariyaasha | Bartamaha
Wasiirka warfaafinta iyo isgaarsiinta Dowlada Soomaaliya ayaa sheegay iney doonayaan iney tababaraan wariyaasha Soomaaliya.
Isagoo wareysi siinayay idaacada Bar-kulan ayuu Cabdullaahi Ciil-mooge u sheegay iney wadaan qorshe ay saxafiyiinta Soomaalida ay ku tababarayaan iyagoo adeegsanayaan khabiiro saxafada oo ka keenayaan dibadda.
Ciil-Mooge ayaa muujiyey sida uu uga xun yahay dilka wariyaasha lagula kacayo iyadoona sanadkaan la diley 18-wariye, tiro kalane ay noqdeen kuwo la dhaawacay ama barakacay.
Wasiirka ayaa xusay iney wasaradiisa ay ku dadaali doonto sidii wariyaasha nabad galyadooda loo ilaalin lahaa, isagoona ka codsaday saxafiyiinta iney ilaaliyaan anshaxa saxafada iyo shuruucda caalamiga ah.
Soomaaliya ayaa waxa ay kamid tahay wadamada ugu khatarta badan saxafada iyadoona tan iyo 2007 lagu diley tiro wariyaal ah iyadoona ay aad u badatey wariyaasha qaxaya ee qurbaha aaday. Dhanka kalane hormar badan ay saxafada ay gaarayso oo soo badanayaans saxafada xorta ee wadanka ka howl-galaysa.
Wasiirka warfaafinta Ciil-mooge ayaa sheegay inuu doonayo inuu la kulmo masuuliyiinta warbaahinta xogta eek a howl-gasha Soomaaliya, si ay u abuuranto wada shaqeyn saxafada iyo wasaarada dhex marta.